Wednesday February 18, 2015 - 14:12:08 in Wararka by Super Admin
Koox Maleeshiyo ah oo ka tirsan kuwa Ashahaada la dirirka ee Maamulka DF ayaa maanta la soo tubay wadada Makka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho iyagoo sheegaya iney sameynayaan howlgallo baaritaano ah oo daba socda dilalkii shalay ka dhacay magaala
Koox Maleeshiyo ah oo ka tirsan kuwa Ashahaada la dirirka ee Maamulka DF ayaa maanta la soo tubay wadada Makka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho iyagoo sheegaya iney sameynayaan howlgallo baaritaano ah oo daba socda dilalkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Maleeshiyaadkan ayaa hakiyay isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee wadada iyagoona baarayay dadweynaha iyo gaadiidkaba.
"Maanta waxey tubnaayeen wadada, markii nala istaajiyay ayaa nagula yiri waa qolyihii afka duubnaa, waa yaabee haddii ay wax iska dhicinayaan mey raadsadaan kuwa maalin waliba dilaya madaxda dawladda" ayuu yiri qof reer Muqdisho ah oo aan la hadalnay.
Dadka ugu badan ee howlgallada maleeshiyaadku saameeyaan ayaa ah taksiileyda ka howlgala magaalada Muqdisho kuwaas oo haddii waddooyinka la xiro shaqo la'aan ay soo wajahdo.
"Nimankaan Inkaaraa heysata, Gelinka hore ee maalintii waxey leeyihiin howlgallo ayaan qaadnay, gelinka danbe ee maalintiina Shabaab waxey leeyihiin madax ka tirsan dawladda ayaan dilnay, shalay ayaa u danbeysay" ayuu yiri Axmed Foodey oo ah Taksiile Muqdisho ka shaqeysta oo ka careysnaa howlgallada Maleeshiyaadka.
Ciidanka dhanka Amniga ee Xarakada Al-Shabaab oo aad mooddo iney adeegsanayaan xirfado dhaafsan sirdoonada Caalamiga ah iyo kuwa Soomaalida ayaa Muqdisho ka sameeya howlgallo aad u qorsheysan oo aan kala reebin Masuul dawladeed, Xildhibaan, Sarkaal Ciidan iyo shaqaale wasaaradeed.
Shalay ayay aheyd markii toogasho ka dhacday wadada Aadda garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku dhinteen masuuliyiin DF u qaabilsan Airport-ka Muqdisho, waxaana weerarkaas sheegtay Al-Shabaab oo aan looga baran iney ka hadlaan qaabka ay weerarada u fuliyaan.